Global Voices teny Malagasy » Noraràn’ny Pakistan fanindroany ny TikTok · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2021 16:14 GMT 1	 · Mpanoratra R Umaima Ahmed Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Saripikan'i cottonbro  avy ao amin'ny Pexels . Nampiasaina araka ny Pexels License .
Nobaikon'ny Pakistan Telecommunication Authority (PTA na Fahefana Fifandraisandavitra Pakistan) ny mpanome tolotra aterineto rehetra hibahana ny zotra mankany amin'ny sehatra ho fampanajana ny didim-pitsarana  navoakan'ny Fitsarana Ambony ao Peshawar High Court ao Khyber Pakhtunkhwa izay nanoritsoritra ny votoaty TikTok ho “vetaveta fihetsika sy fisaina sady mifanohitra amin'ny fomban-drazana.”
Ny didy dia namaly ny fanambaràna iraisana napetraky ny mponina miisa 40 avy ao Peshawar  izay nangataka ny fandrarana ilay fampias lahatsary ho manitsakitsaka ireo fepetra napetraky ny lalampanorenana izay mametra ireo fihetsika mifanohitra amin'ny fitsipi-piainana islamika.
Fanindroany izao ny TikTok no voabahana ao amin'ity firenena aziatika atsimo ity. Tamin'ny Oktobra  ny PTA nanakana izany tsy misy didim-pitsarana, tamin'ny lazaina fa tsy nanaisotra votoaty tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy io.
Nesorina ny fandraràna folo andro taty aoriana , rehefa nanome antoka ho an'ny manampahefana Pakistaney ny orinasa ByteDance renin'ny TikTok fa hohamafisiny ny fanarahamaso sy fanalefahana ny votoaty ao aminy.
Taorian'izao fanakanana farany izao, namoaka fanambaràna ny TikTok milaza  fa mampiasa sosoka teknôlôjia sy paikadim-panalefahana hamantarana sy ijerena indray ireo votoaty manitsakitsaka ireo dina ifanarahana ampiasana azy sy ny tororalalana ho an'ny vondrom-piarahamonina.
Nomarihan'ny orinasa ny H2 2020 Transparency Report  [Tatitra momba ny fangaraharahana H2 2020], izay mampiseho ohatra sasantsasany amin'ireo votoaty nesorina araka ny lalànan'i Pakistan. Na izany aza, manaiky ihany koa ny orinasa fa manana andraikitra amin'ny fiantohana ny zon'ny mpikirakira azy haneho hevitra amin'ny fomba vaovao eo amin'ny sehatra, raha mbola mifanaraka amin'ny fitsipika ifampifehezan'ny orinasa izany.
Malaza dia malaza  tokoa ny TikTok ao Pakistan, ary nitsikera  ny fandraràna ireo fihainom-pahoaka ao amin'ny firenena.
Tamin'ny Ockobra 2020 , novelomin'i Pakistan ny fitsipika  vaovao ho an'ny sehatra media sosialy mandrara votoaty “manala baraka, vetaveta ambava sy fihetsika, manevateva (izay masina).” Izay sehatra tsy manaraka izany dia mety ampandoavina onitra  hatramin'ny Rs500 tapitrsisa (US$ 3,22 tapitrisa).
VAKIO BEBE KOKOA: Pakistàna: mety ho voarara noho ilay lalàna vaovao ‘henjana dia henjana’ ireo sehatry ny media sôsialy  [mg]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/24/152031/
 napetraky ny mponina miisa 40 avy ao Peshawar: https://www.dawn.com/news/1612935/tiktok-banned-until-filtering-mechanism-in-place-phc
 folo andro taty aoriana: https://globalvoices.org/2020/10/23/pakistan-lifts-ban-on-tiktok-with-conditions/
 Malaza dia malaza: https://images.dawn.com/news/1186306/the-year-on-tiktok-stories-from-pakistans-most-rapidly-growing-video-sharing-app
 Tamin'ny Ockobra 2020: https://www.samaa.tv/news/2020/11/social-media-regulation-rules-pakistan/
 Pakistàna: mety ho voarara noho ilay lalàna vaovao ‘henjana dia henjana’ ireo sehatry ny media sôsialy: https://mg.globalvoices.org/2020/12/07/150531/